Ndibeke ukholo lwam kuYesu…ngoku kuzakuthini?
Wenze kakuhle! Wenze isigqibo esitshintsha ubomi! Mhlawumbi uyabuza, “Ngoku kuzakwenzeka ntoni? Ndingaluqala njani uhambo lwam noThixo?” Amanyathelo amahlanu akhankanyiweyo ngezantsi asuka ebhayibhileni azakukunika umkhomba ndlela omawuwulandele. Xa unemibuzo ngoluhambo lwakho, Nceda utyelele u- www.GotQuestions.org/Xhosa.
1. Qiniseka ukuba uyaluqonda usindiso.
UYohane wokuqala 5:13 uyasixelela, “Ndinibhalela ezizinto nina bantu bakholwayo kwigama lonyana kaThixo ukwenzela niyazi ukuba ninobomi obungunaphakade.” UThixo ufuna ukuba siluqonde usindiso. UThixo ufuna ukuba nesiqinisekiso sokuba ngenene sihlangulwe. Ngokufutshane, masijonge ingongoma zosindiso:
(a) Sonke sonile. Sonke senze izinto ezingamkholisiyo uThixo (KwabaseRoma 3:23).
(b) Ngenxa yezono zethu, sifanele sisohlwayo sokususwa kuThixo ngonaphakade (KwabaseRoma 6:23).
(c) UYesu wafa emqamlezweni ehlawula isohlwayo sezono zethu (KwabaseRoma 5:8; 2 KwabeKorinte 5:21). UYesu wasifela, esithabathela kuye isohlwayo sethu. Uvuko lwakhe lwaqinisekisa ukuba ukufa kwakhe kusanele isohlwayo sezono zethu.
(d) UThixo unika uxolelo nosindiso kubo bonke ababeka ithemba labo kuYesu- abathemba ukuba ukufa kwakhe kwabayintlawulo yezono zethu (UYohane 3:16; KwabaseRoma 5:1; Romans 8:1).
Ngumyalezo wosindiso! Ukuba ubeka ithemba lakho kuYesu njengomsindisi wakho, uyakuba usindisiwe! Zonke izono zakho zixolelwe, kwaye uThixo uyathembisa soze akushiye okanye akulahle (KwabaseRoma 8:38-39; UMateyu 28:20). Khumbula ukuba usindiso lwakho lukhuselekile kuYesu Kristu (UYohane 10:28-29). Ukuba uthembele kuYesu yedwa njengomsindisi wakho, unganesiqinisekiso sokuba uyakuhlala ngonaphakade noThixo eZulwini!
2. Fumana icawe eyiyo nefundisa ngebhayibhile.
Ungacingi ngecawe njengesakhiwo. Icawe ngabantu. Kubalulekile ukuba abakholelwa kuYesu babengabahlobo. Yenye yenjongo eziphambili zecawe. Njengokuba ubeke ithemba lakho kuYesu Kristu, siyakukhuthaza ngamandla ukuba uzifumanele icawe ekholelwa eBhayibhileni kwindawo okuyo ukuze uthethe nomfundisi. Mchazele ngokholo lwakho olutsha kuYesu Kristu.
Injongo yesibini yecawe kukufundisa ngeBhayibhile. Ungafunda ukuba ungayisebenzisa njani imiyalelo kaThixo ebomini bakho. Ukwazi iBhayibhile sisitshixo sokuhlala ubomi obuyimpumelelo kunye nobomi obunamandla bobuKholwa. UTimoti wesibini 3:16-17 uthi, “Zonke izibhalo ezingcwele zingumphefumlo kaThixo kunye nemfundiso encedayo, ekhalimayo, elungisayo kunye neqeqeshela ebulungiseni, ukwenzela ukuba umntu kaThixo akwazi ukulungela wonke umsebenzi olungileyo.”
Injongo yesithathu yecawe kukudumisa. Ukudumisa kukubulela uThixo ngako konke akwenzileyo! UThixo isisindisile. UThixo uyasithanda. UThixo uyasilungiselela. UThixo uyasikhapha ze asikhokele. Singangambuleli njani ? UThixo ungcwele, ulungile, unothando, unemfesane, kunye nenceba. IZityhilelo 4:11 ziyasixelela, “Unexabiso, uyiNkosi noThixo wethu, ukuze sifumane ubungcwalisa bakho nokubekeka namandla ongumdali wezinto zonke kwangawe zenziwa zaze zazizo.”
3. Ngosuku ngalunye beka ecaleni ixesha lokujonga kuThixo.
Kubalulekile ukuba ngemini nganye sibenexesha esilichitha ngokujonga kuThixo. Abanye abantu balibiza ngokuba “lixesha elizolileyo.” Abanye balibiza “umthandazo,” ngokuba lixesha apho sithandaza kuThixo. Abanye bakhetha ukubeka ixesha lakusasa ecaleni, ngexesha abanye bekhetha ixesha langokuhlwa. Akukhathaliseki nokuba ulibiza njani elixesha okanye ulenza nini. Into ebalulekileyo yeyokuba usoloko uchitha ixesha noThixo. Zeziphi iziganeko ezisenza sibenexesha noThixo?
(a) Umthandazo. Umthandazo kukuthetha noThixo. Uthetha noThixo malunga nemicimbi kunye neengxaki zakho. Ukucela uThixo ukuba akunike ubulumko aze akukhokele. Cela uThixo akunike izinto ozifunayo. Mxele uThixo ukuba umthanda kangakanani nokuba unombulelo ongakanani ngezinto akwenzela zona. Umthandazo umalunga nalento.
(b) Ufundo lweBhayibhile. Ukwengeza kukufundiswa ngeBhayibhile ecaweni, iSikolo seCawe, okanye ufundo lweBhayibhile – kuyafuneka ukuba uzifundele iBhayibhile ngokwakho. Ibhayibhile iqulathe konke ofuna ukukwazi ukwenzela ukuba uhlale ubomi obuyimpumelelo bobuKristu. Iqulathe isikhokelo sikaThixo sokuba ungazenja njani izigqibo zobulumko, ungayazi njani intando kaThixo, ungabafundisa njani abanye, kwaye ungakhula njani ngokwasemoyeni. Ibhayibhile ngamazwi kaThixo kuthi. IBhayibhile yincwadi yesikhokelo kaThixo ebalulekileyo yokuba singabuphila njani ubomi bethu ngendlela ekholisa Yena neyanelisa thina.
4. Yakha ubuhlobo nabantu abazakukunceda ngokwasemoyeni.
KwabaseKorinte bokuqala 15:33 bayasixelela , “Sukulahlekiswa: ‘Abahlobo abangalunganga bayasitshintsha isimo esihle.’” IBhayibhile izele zizilumkiso malunga nokulukuhlwa “okubi” abantu abanokwenza kuthi. Ukuchitha ixesha nabo benza izinto zesono zingasenza nathi silukuhleke zezozenzo. Izimo zabantu esizidibanisa nabo zi “ngasosulela”. Yiyo lonto kubalulekile ukuba masizidibanise nabantu abathanda uThixo nabazinikeleyo kuye.
Zama ukufumana umhlobo okanye ababini, mhlawumbi ecaweni yakho, abanokukunceda baphinde bakukhuthaze (KumaHebhere 3:13; 10:24). Cela abahlobo bakho balubeke kuwe uxanduva elibhekiselele kwixesha elithe cwaka (umthandazo), lemisebenzi yakho, nelokuhamba noThixo. Babuze ukuba ungenza kwanjalo na kubo. Lento ayithethi ukuba balahle bonke abahlobo bakho abangazaniyo neNkosi uYesu njengomsindisi wabo. Qhubeka ubengumhlobo wabo kwaye ubathande. Bazise ngokulula ukuba uYesu ubutshintsile ubomi bakho kwaye awunakukwazi ukwenza izinto ubufudula uzenza. Cela uThixo akunike amathuba okwabelana nabahlobo bakho ngoYesu.
Abantu abaninzi abaluqondi kakuhle ubhaptizo. Igama elithi“ubhaptizo” lithetha ukuthi ntywiliselwa emanzini. UBaptizo luhlobo lwaseBhayibhileni lokwazisa esidlangalaleni ukholo lwakho olutsha kuKristu nokuzimisela kwakho ekumlandeleni. Isenzo sontywiliselo emanzini sibonakalisa wena ungcwatywa noKristu. Isenzo sokuphuma emanzini singumfanekiso wokuvuka kukaKristu. Ukubhaptizwa kunxulumanisa wena nokufa kukaYesu, nokungcwatywa, kunye nokuvuka kwakhe (KwabaseRoma 6:3-4).
Ukubhabtizwa ayikuko okukusindisayo. Ukubhaptizwa akuzihlambi izono zakho. Ubhaptizwa linyathelo lokuthembeka, kukwazisa esidlangalaleni abantu ngokholo lwakho kuKristu emnye ongumsindisi. Ubhaptizo lubalulekile kuba linyathelo lokuthembeka – lazisa ngokuphandle ukholo lwakho kuKristu kunye nokuzimisela kwakho kuye. Ukuba ulungele ubhaptizo kufuneka uthethe nomfundisi wakho.